Daangaan Oromiyaa Dhiiga Wareegamtootaatiin Sararamte|Simarsan – OROMP4 Studio
Daangaan Oromiyaa Dhiiga Wareegamtootaatiin Sararamte|Simarsan — August 21, 2017
AUGUST 21, 2017 /LEAVE A COMMENT
”Daangaan Oromiyaa Dhiiga Wareegamtootaatiin Sararamte: Muramtee Kennamuuf hin Jirtu! Harargeen Mallattoo Tokkummaa, bilisummaa fi Oromummaa ti! ” ~ Lammii Beenyaa
Kaartaa Oromiyaa (Halluu Magariisa kan dibame)
Qabsoo hadhooftuu daangaan Oromiyaa dhiiga wareegamtootaan sararamte kan eegalte Baha Oromiyaa, Harargeetti. As dachee bahaa kanatti rasaasni farraa gabrummaa yeroo jalqabaaf gooticha Oromoo Elemoo Qilxuutiin dhukaafamte. Xurree Elemoo Qilxuu saaqe sanarra gootuwwan kumaatamatu hanga har’aatti hiriiree gabrummaa hiddaan buqqisuuf falmaa jira.
Sumaalee lafa kabajaan gootonni itti wareegaman kana murtee fudhachuuf hawwii fi abjuu yeroo dheeraa akka qabdu beekamaadha. Hawwii fi abjuun bara mootummaa Ziyaad Baarree Sumaaliyaa guddittii ijaaruuf karoorfame yoo fashale iyyuu, fedhiin daangaa babal’ifachuu fi yoo xiqqaate hanga malkaa Awwaash guddichaatti weerara bananii of jala oolfachuu kun ergamtuu akka Abdii Illeeyiif fedhii maraatummaa irraa madde ta’ee argamaa jira. Hawwiin shiftoota kanaa hawwii qofa ta’ee hafuu akka qabu Oromoon ifatti mirkaneessuu qaba.
Nuti Oromoo wareegamtoota daangaa Oromiyaa dhiiga isaaniin nuuf sararan irraa dhaallee kabajaan tursiifnee dhaloota itti aanutti dabarsuuf dirqama qabna. Amna biyya tokko ijaarrachuuf eegalame kan galmaan gahuu dandeenyuu fi falmii mirga abbaa biyyaa barootaaf itti turre kan injifannoon goolabnu galfata nutti kenname kana utuu hin sharafiin yoo mirkaneessine qofa. Galfatni Elemoo, Jaarraa Abbaa Gadaa, Buruysoo Boruu, Baaroo Tumsaa fi gootowwan kumaatama dirree bahaatti gabrummaan falmaa wareegaman sun daangaa isaan nuuf sararan eegnee falmaa keenya walabummaa Oromiyaan goolabuudha. Falmaan kun har’a ilmaan Oromoo bahaa hanga dhihaa, kaabaa hanga kibbaa jiran mara gaafatti.
Har’a abjuu fi hawwiin Sumaalee Abdii Illeey kun fedhii fi hawwii diina keenyaa kan garee TPLF ti. Waggoota 26 kana gareen kun ummata nagayaatti juumlaan duulee qe’eesaatti fixuu, buqqisuu, hiyyummaa keessatti hambisuuf yaaluu fi shororkaan akka jiraatuuf lola hin akeekamne itti bane jeeqaa har’a gahe. Ergamni kun akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo gootni imaanaa nutti kennan gufachiisuuf shira akka addaatti shaakalamaa jirudha. Kanas Mallas Zeenaawwii obboleessa isaa Umar Hassan Albashir irraa barate.
Umar Hassan Al-Bashir miliishota marartee namoomaa hin qabnee fi sirna mootummaan hin abboomamne kumaatamaan leenjisee ummata Daarfur bilisummaa isaaf falmatutti gadhiisee gaaga’ama hiriyaa hin qabne qaqqabsiise. Ummata nagayaatti duuluun marartee tokko malee lafarraa duguugsise. Yakka suukanneessaa addunyaan keenya utuu agartuu calliste sanaaf namni itti gaafatamummaa fudhate hin turre. Mallas Zeenaawwii hiriyaa isaa Umar Hassan Al-Bashir yakka irraa qulqulleessuuf duula baneen hooggantoota Afriikaa biro amansiisee akka inni mana murtiitti hin dhihaanne taasise.
Muuxannoo Milishota Jaanjaa jedhaman sanarraa argataniin bara 2007 waraana Liyyuu Poolisii hundeessan. Humni farra nageenyaa kun jalqaba ummata Sumaalee lafarraa duguuge. Dubartoota ni gudeeda, qabeenya ni saama, qabss’ota ni adamsa, ilmaan qabsaa’ota Ugaaden ni buta, biyyoota ollaatti bahee nagaa booressa, ajjeechaa dhoksaa ni gaggeessa. Yakki humni kun raawwatu sadarkaa addunyaatti beekamuun qorannoon mataduree ‘Jail Ogadeni” jedhamu hanga adeemsifamutti gahee jira.
Badii humni kun raawwatu duubaan TPLF fi tikoonni ishee akka jiru ragaa heddutu jira. Fedhiin jara kanaas ummata Oromoo aangoo TPLFtti yaaddoo uume kana akka malee rukutuu fi dadhabsiisuudha. Akeekni ammaa kun walitti bu’iinsa daangaarra ture kan uumamaa fi bulee jaarsummaan dhumu miti. Akeekni ammaa weerara karooraan humna gita lamaa (Kan TPLF fi Liyyuu Poolis) walitti qindeessuun eegalamedha. Weerara kan irra aanuun danda’amu humna weerara sana kiphu yoo qabaatan qofa. Oromoon amma gaaffii seenaa jala jira. Yookiin humna ta’ee diina daangaa isaa cabsee dhufe kana ofirraa deebisuu, ykn ummata gamtaan lolachuu hin dandeenye ta’ee gita yartuutti harka kennachuudha. Yoo yartuu taane seenaan nu gaafata. Yoo humna taane seenaan nu faarfata.
Yeroo ammaa kanatti daangaan Baha Oromiyaa, daangaan Oromiyaa diinaan cabee jira. Gitni weerartuun gama lamaan waltumsite lafa keenya dhiigaan lolla’aa jirti. Ummanni keenya baha Oromiyaa hanga dhumaatti falmataa jira. Falmiin kun kan nama jajjabeessu ta’uyyuu Oromoo bal’aan hanga ammaatti callisee ilaaluun gaaffii seenaa jala akka seennu nu taasisa. Oromoo, gaafa Harargeen dhiigde Shawaatu dhiige, Arsiitu dhiige, Baaleetu dhiige, Booranaa fi Gujiitu dhiige, Jimmaa fi Wallaaggaatu dhiige, Iluu Abbaa Booraa fi Wallootu dhiige; gaafa aayyoon Harargee tokko salphattu salphina aayyoo Oromoo hundaa ta’uu qaba. Dubbii amma itti kaate kana Oromoo kabajaan ofirraa deebisuu qaba.
Dubbii kana ofirraa deebisuuf yeroo kam caalaa tokkummaan barbaachisaadha. Tokkummaa afaanii miti tokkummaa tarkaanfii barbaanna. Seenaarraa haa barannu. Qoodamnee diina injifachuu hin dandeenyu. Tokkummaatu kabaja. Tokkummaatu furmaata. Ummata Yartuun Sumaalee itti roorrisaa jirtu tokkummaan itti haa duullu. Kanaaf, daangaa keenya cabe falmuufis ta’e ummata keenya salphina keessaa baasuuf tokkummaa hawaasaa, jaarmiyaa fi qaamota adda addaa yeroo kam caalaatti nu barbaachisa. Harargeen mallattoo tokkummaa, falmaa bilisummaa fi Oromummaa ti. Kana amma hojiin agarsiisuu qabna.
Qajeelfama Haala Yeroo |Simarsan —
Qajeelfama Haala Yeroo |Simarsan
Qajeelfama Haala Yeroo Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG itti jiru Ilaalchisuun Hoggansa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Dargaggoota Oromoo, Daldaltoota Oromoo, hojjettoota Mootummaa, Qonnaan bultoota Oromoo, Barattoota Oromoo, Barsiisota Oromoofi Uummata Oromoo waliigalaaf kenname(seenaadhugaasite)
Sochiin Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FXG, duulli gabaa lagachuufi qabeenyaa ofii gabaa laguu, diddaan gibiraafi gidiraa, daandii konkolaataa cufuufi uggura geejjibaa buusuufi hojii dhaabuu dabalatee, akkuma waamichaa irra deddeebinee bifuma kanaafii haala yeroo waliin adeemuu qaba jennee waliif dhaamaa turreen ammas haaluma kanaan kan itti fufifinsaan gaggeeffama jirudha. Akkuma Ibsoota Sochii warraaqsa dabarsaa waamichaa qabsoo uummata Oromoo hundaaf gochaa jirruun haalotni maqaa Qeerroo dahachuun sochii Warraaqsaa danquu fi afaanfaajjii uumuun diinaaf ulaa saaquu barbaadan mumuldhachaa waan jiraniif Irra deebinee adeemsa Sochii warraaqsa FXG fi tarsiimoo haala yeroo irratti hundaa’een Sochiin Qabsoo bilisummaa Uummata Oromoof gaggeessa jiruu daran jabatee akka itti fufuuf Irra deebinee qabxiilee xiyyeeffannoon irratti godhamuu qabu uummata Oromoo hunda yaadachiisuuf dirqamne jirra.
1. Lafti Keenya Lafee Keenya Lafa Keenya Muranii Kennuun Lafee Keenya Muranii Kennuu Waliin Tokkuma. Haalli yeroo amma baha Oromiyaa Godina Harargee Bahaa Aanota akka Cinaksan, Gursumiifi gandoota baadiyaa Oromiyaa Barargee bahaa irraan uummata Oromoo irratti yakki waraanaz poolisoota maqaaf liyyuuhayilii Somaaliyaa jedhamaniifi mootummaa wayyaaneen hidhachiifamaniin gaggeeffamaa jiru dura uummatni Oromoo waan qabnuun dura dhaabbachuun of ittisuu qabna. lafti Uummata Oromoo muramee Somaalotaaf kennamaa jiru hatattamaan deebifamuu qaba. Dhimmi yakki ulfataan Harargee Bahatti uummata keenyarratti rawwatamaa jiru kun gaaffii kabajamuu mirga abbaa biyyummaa waliin tokkuma waan ta’eef uummatni Oromoo bakka jirtan cufatti Sagalee mormii haa dhageesifnu, Uummata keenya cina dhaabbatnee haa falmannu jechuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo Waamicha qabsoo irraa deebi’uun dabarsa!!
2. Sochiin Warraaqsa Biyyooleessa Oromiyaa FXG Oromiyaa keessatti tarsiimoo Sochii Warraaqsa Uggura dinagdee kaa’uu, duula gabaa kagachuufi qabeenyaa ofii gabaa laguu, daandiiwwaan konkolaataa Godinaalee Oromiyaa keessatti Cufuu, Diddaa Gibraafi Gidiraa itti fufinsaan gaggeessuu, hojii dhaabuufi Walgahii mootummaan Wayyaaneefi ergamaan wayyaanee OPDOn teesisuu kamuu gaaffii mirga abbaa biyyummaafi bilisummaa Oromoo finiinsuun dura dhaabbachuu gidduu galeessaa godhateen akka itti fufuu Qeerroon Bilisummaa Oromoo irra deebi’uun Waamicha dabarsine isin yaadachiifna!!
3. Yaa uummata Oromoo hayyoonnii fi beektootni kee kaleessa abukaatoo kabajamuu mirga abbaa biyyummaafi bilisummaa keef falmaa turan hardha akka yakkamaatti ilaalamuun manneen hidhaa keessatti gidirfamaa jiraniifi kanneen murtiin dabaa irratti dabarfamee manneen hidhaa biyyatti keessatti hiraarfamaa jiran hundaaf bakka jirruu hundaa abuukaattoo isaanii ta’uun dirmannaa Oromummaa gochuufiin sagalee isaaniif ta’uu qabna, falmannee mirga isaanii kabachiisuufi hiraarsa ulfaata kana irraa akka hiikkamaniifi kaayyoon ilmaan Oromoo irratti hiraarfamaa jiran galii akka gahuuf bakka jirruu qabsoo haa finiinsinu!!
4. Hayyootni Oromoo, Actiivistootni Oromoofi Jaarmiyaaleen Siyaasaa Oromoo Sochii Warraaqsa FXG itti jirruuf akkuma dirmannaafi tumsa qabsoo gochaa turtan itti fufinsaan sochii kana cina dhaabbachuun humna qabsoo ta’uufi kaayyoofi akeekaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo milkeessuu irratti xiyyeeffannoo gochuun akka uummata keessaniif hiriirtanii galma keenya tokkicha kan bilisummaa Uummata Oromoofi walabummaa Oromiyaaf hojjetan irras deebinee waamicha keenya dabarsina!!
5. Mootummaan Wayyaanee wayita kufaa jiru kanatti kufaatii irraa dandamachuuf bulchiinsa Waraana Komaandii Poostii Kaaseera jedhee ololaaf haa lallabuu malee Oromiyaan waggaa 26 guutuu fedhii uummata Oromoo malee afaan qawween bulaa kan turte ta’uun beekamadha, kanaafuu Qeerroon Bilisummaa Oromoo akeekni wayyaaneen Emargency State kaasnee jirra jettee labsaa jirtuu gaaffii Uummata Oromoof deebii waan hintaaneef hanga gaaffiin mirga abbaa biyyummaafi bilisummaa Uummata Oromoo kabajamutti sodaa tokko malee wareegama kamuu baafnee falmachuuf qophii ta’uu uummata keenya hubachiisuun uummatni Oromoo waan dandahuufi waan qabu hundaan dirmanna qabsoo bilisummaa Oromoof gochuun waltaanee garbummaa Waloon nutti fe’ame of irraa haa buufnu!
6. Haala rakkoo siyaasaa waliigalaa Impaayeeraa Itoophiyaa fi Gaaffii Bilisummaa Uummata Oromoofi saboota Cunqurfamoo biyyatti karaa nagaa furuuf Mootummaan Cee’uumsaa yeroo kan ABO fi dhaabbilee Siyaasaa Oromoo hundaa kan hirmaachise akka yeroon hundeeffamuuf qabsoon roga hundaan jabaatee akka itti fufuuf jaarmiyaalee Siyaasaa Oromoo hundaafi jaarmiyaalee Siyaasaa saboota Cunqurfamoo hiree fakkaataa uummata Oromoo qaban hundaaf Waamicha dabarsina!
Smugglers Target Ethiopian, Somali Teens for Deadly Trip to Yemen |Simarsan — August 20, 2017
Smugglers Target Ethiopian, Somali Teens for Deadly Trip to Yemen |Simarsan
AUGUST 20, 2017 /LEAVE A COMMENT
(kichuu.com) | Despite being seven months pregnant, Mesno Taha left her home in Harerge, Ethiopia to find peace and a better future. She trekked to the Somali zone of Ethiopia, crossed the border into Somalia and paid to board a boat bound for Yemen.
Shoorri diyaasporaan qabsoo Oromoo keessatti qabu akka malee hubataa jirra|Simarsan — August 14, 2017
Shoorri diyaasporaan qabsoo Oromoo keessatti qabu akka malee hubataa jirra|Simarsan
Haala Gidduu kana Qabsoo Bilisummaa Oromoo Ilaalchisee Marsaalee Hawaasaa irra naanna’aa jiruuf yaada dhuunfaa koo (Lammii Beenyaa)
Qabsoo bilisummaa Oromoo ilaalchisee yeroo adda addaatti yaadni garaa garaa ka’uun waanuma baratame dha. Yaadonni kun bifa lama qabu: Kan ijaarsaa fi diigumsaa. Akka ummata bilisummaa isaaf falmataa jiruutti yaada ijaarsaa gabbifataa fi caalmaatti irratti hojjetaa, kan diigumsaa ammoo tuffatee bira darbuu qofa osoo hin taane hundeen gogsaa fi hongeessaa deemuun barbaachisaa dha.
Tibbana shoora diyaaspooraan Oromoo qabsoo Oromoo keessatti qabu yaadni naannawaa jiru yaada sirrii fi qajeelummaa irraa waan madde natti hin fakkaatu. Shoorri diyaasporaan qabsoo Oromoo keessatti qabu kana akka malee hubataa jirra. Akkuma beekamu Oromoonni biyya hambaa jiraatan irra hedduun roorroo halagaa jalaa lubbuu baafatanii hirkattummaan biyya hambaa jiraatu. Oromoonni kun gariin kallattiin qabsoo hidhannoo keessaa qooda kan fudhataa turan yoo ta’u gariin ammoo yoo xiqqaate biyya keessatti sochii ifa ta’e taasisaa turan. Humni kun erga biyya isaa irraa baqatee gosa lamaan ijaaramee qabsoo keessatti kallattiin akka hirmaatu taasifamaa ture. Kunis miseensa jaarmiyaa ta’uu yookiin caayaa ummataa jalatti seeraan ijaaramuun ture. Gumaachi humni alatti ijaarame kun qabsoo Oromoo keessatti qabus akka amma jedhamaa jiru kana laaftuu fi jijjiirama kan hin argamsiifne hin turre. Yaa xiqqaatuu jireenya Waraana Bilisummaa Oromoof humni kun murteessaa ture. Falmaa ilmaan Oromoo wayyaanee waliin godhan keessatti qooda isarraa barbaadamu bahataa ture. Humna ala jiru kana akka laayyootti tuffachuun ‘homaa bu’aa hin qabdu, jijjiirama hin fiddu’ jedhanii tuffachuun qaanii guddaadha.
Qabsoon farra bilisummaa kamuu deggersa ofirratti irkannoo fi tumsa ollummaa gaarii gaafata. Qabsoon bilisummaa Oromoo tumsa ollaa gaarii kan hin qabne ta’uun beekamaa dha. Gaanfa sana keessatti biyyi ollaa waraana Bilisummaa Oromoo simatte yoo jiraatte Ertiraa qofa dha. Haalli Ji’oopolotiksii gaanfichaa daran hammaachuun qabsaa’onni Oromoo haala rakkistuu keessatti qabsoo akka itti fufan dirqisiiseera. Rakkoon ji’oopolotiksii kun jalqaba hundeeffama ABO irraa ka’ee kan ture yoo ta’u gaggalaafatamuu hooggantoota jaarmiyaa kanaaf sababa guddaadha. Rakkoon kun hanga har’aatti itti fufeera. Haala hamtuu akkasii keessatti qabsoo gaggeessuun kanneen lubbuu ofii wareegaa qabsoo jiraachisanii har’aan gahan kana akka salphaatti namoota dandeettii fi gootummaa isaanii waakkachuun waan fuulduratti nu deemsisu miti. Kufaatii akka sabaatti qooddachuu qabnu namoota muraasatti haguuguun ofii bilisa of baasuun itti gaafatamummaa fudhachuu baqachuu fakkaata.
3. Jaarmiyaa Oromootti duuluun furmaata miti. Qabsoon ummata kamiiyyuu jaarmiyaa malee galma hin gahu. Injifannoon argamu illee yoo jiraate abbaa irree ykn humna hin barbaachifneen butama. Amma kan ta’aa jiru faallaadha. Xiyyeeffannoon fi yaaliin godhamaa jiru jaarmiyaa dadhabsiisuu fi gatii dhabsiisuu dha. Kun akka sabaatti waan deemsisu miti.
4. Haqa dubbachuuf yoo ta’e ABO caalaa jaarmiyaan hojii qabatamaa hojjetee ummatatti agarsiise hin jiru. ABOtti aanee OFCn hamma humna isaa tattaafateera. Jaarmiyaa kunniin lamaan akka lafa dhaabbatanii fi qabsoo isaanii daran akka jabeessaniif waan barbaachisu maraan bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Jaarmiyaa jabaan hawaasa jabaa keessaa baha. Hawaasa jabaan hoggana jabaa argamsiisa. Herregni kun ummata hundaaf hojjeta. Kanaaf hawaasa keenya biyya hambaa jiru haamilee cabsuu utuu hin taane akka inni jaarmiyaa jabeeffatuuf tattaafachuutu furmaata ta’a.
5. Waa’een ABO gaafa ka’u, ‘ABO isa kam?” gaaffiin jedhu itti aana. Ummanni Oromoo kan beeku ABO tokko qofaadha. Humnoonni ABO irraa biyya hambaatti bahuun alaabaa ABO qabatanii maqaa kanaan shan jaha ta’anii walgahan Murna (faction) malee ABO miti. Dhugaa kana haaluun namoonni ABOn bakka dhibba akka jirutti ibsuuf yaaltanii fi tokkoomsuun akka dadhabametti addeessaa ooltan dogoggora hamaa keessa jirtu. Haala kanaan yaadaa jirra yoo ta’e OFC bakka lama jira. Kan Dr. Mararaa Guddinaa tiin hoogganamuu fi kan Tolosaa Tasfaayeen durfamu. Haa ta’uutii garuu Tolosaan maqaa qabatee waan jiruuf eenyuyyuu bakka kennaafii hin jiru. Kan ABOs akkasuma. Murni lama sadii yoo irraa baheyyuu kan kaayyuu ganamaa qabatee qabsootti ciche ABO qofadha.
6. Jaarmiyaa keessatti hammatamuun qabsoo gaggeessuun hawaasa kamiif iyyuu murteessaadha. Fakkeenyaaf hawaasa Filisxeem, Ertiraa, Esraa’el, Burmaa, Kolombiyaa fi kanneen biroo ilaaluu dandeenya. Hawaasni kunniin bakka deeman maratti ijaaramanii socho’u. Bakka deeman maratti biyyaa fi jaarmiyaa isaaniif waardiyaa ta’anii falmu. Dhiibbaa isaan argamsiisanis waan laayyoo miti. Dhageettii jabaa waan qabaniif siyaasa, dinagdee fi barnoota adda addaa dhuunfataa oolu. Injifannoo gama kanaan argatan biyaa fi jaarmiyaa isaaniif oolfatu. Ummanni Oromoo haala qabsoo ummata kanneenii irraa barnoota gahaa argachuu qaba. Bilisummaa barbaadamu bira gahuuf kanneen dinagdee qaban jabaatanii hojjetanii qarshii argamsiisuun, kanneen beekumsa qaban dhaabbilee adda addaa hundeessuun qorannoo fi takninoolojii babal’isuun, kanneen fedhii qaban leenji’anii loluun qabsoo irraa qooda fudhachuun murteessaadha. Asirratti ummanni biyya keessaa qofti diina dura dhaabbatee haa lolu jedhee eenyutu seera baasee? Biyya waloo ijaaruuf qabsoon gaggeeffamu wareegama waloo gaafata.
7. Adeemsa qabsoo keenyaa keessatti ilaalchaan garaagarummaa yoo qabaannee wal hubannoon garuu dirqama jiraachuu feesisa. Diina waloo kuffisuuf hanga deemnetti hojii hojjetamaa jiru wal hubachiisuun injifannoo ummataa saffisiisuun ni danda’ama. Keessumaa waamicha warraaqsaa biyya keessatti godhamu irratti of eeggannoon baay’ee barbaachisaadha. Yoo kun ta’uu baate ummata kana burjaajjessuun waan hin oolledha. Keessumaa haalli nuti itti miidiyaa fayyadamnuu fi dhimmicha uummata biraan geenyu of eeggannoo guddaa gaafata. Sodaan kun sochii ummata keenya torban darbee irraa argameera. Qaamni tokko yeroo labsu tokkommoo bishaan yoo itti naqe kun qabsoo osoo hintaane qoosaa ijoollee ti. Wal morkii fi wal dura dhaabbannaa keenyaan diinni ni fayyadama, ummannii fi humni qabsoo keenyaa ni burjaajja’a.
8. Qabsoon keenya hooggana akka hinqabne, kaayyoo fi tarsiimoo akka hinqabnetti dhiheessuu yaaluun kufaatii guddaadha. Kana gochuun hawwii TPLF yaaltee itti milkaa’uu hanqatte ofuma keenyaa geessinee kennuufiin tokkodha. Qabsoo biyyaa fi sirna hamaa sana akka malee raase sanaan ‘hooggansa hinqabu, sunaamiidha’ jechuun qabsaa’ota sochii akkasii argamsiisuuf lubbuun wareegaman arrabsuudha. Gootota funyaan diinaa jala taa’anii hafuura dhokfachuun halkanii fi guyyaa hojjechuun caasaa diriirsan, kanneen har’allee usanii hojiitti jiran, gootota eenyu caalaa hojjechuu fi dubbachuu danda’an sana sakandii tokkoof illee dagachuu hinqabnu.
Walumaagalatti, biyyi tokko bilisoomuuf jaarmiyaatti ijaaramuu, naamusaan masakamuu fi wareegama barbaachisu baasuun dirqama. Kanaaf ammoo hawaasni biyya keessa jirus ta’e kanneen biyya hambaa jiran walqixa qooda irraa fudhachuu qabna. Hojimaneen nuti waliif keenyu hin jiru.
UN News Services: Ethiopia: UN Agency Sounds Alarm As Drought-Stricken Herders in Ethiopia Face Massive Livestock Losses |Simarsan — August 13, 2017
UN News Services: Ethiopia: UN Agency Sounds Alarm As Drought-Stricken Herders in Ethiopia Face Massive Livestock Losses |Simarsan
AUGUST 13, 2017 /LEAVE A COMMENT
The drought has led to a significant number of animals dying or falling ill, particularly in the southern and south-eastern regions of the country, as other areas recover from previous seasons’ El Niño-induced drought,”…
ABO’n kaleessas jabaadha, har’as jabaadha |Simarsan — August 12, 2017
ABO’n kaleessas jabaadha, har’as jabaadha |Simarsan
AUGUST 12, 2017 /LEAVE A COMMENT
ABO’n kaleessas jabaadha, har’as jabaadha (Caalaa Hayiluu Abaataan)
Jaarmiyaaleen adda baasaa bilisummaa baroota hedduu qabsoorra turanii kaan isaanii milkaahanii yoo saba isaanii bilisoomsan, kaan isaanii immoo kan badan xiqqaa miti.
Haalli jijjiirama siyaasa addunyaa ( Post Cold War 1990, When the politics tendes to ward identity politics), Jaarmiyaaleen biyyoota hedduu maqaa adda addaa irratti afaarsuun murnoonni aangoo of harkaa qaban injifannoo siyaasa warra mirgaa; Ameerikaatiin cafaqamanii kan dhabaman hedduu dha. HAR’A HEDDUUN ISAANII SEENAA MALEE ISAAN HIN JIRAN! ABO’n garuu abdii bilisummaa fi egeree saba keenyaa waan taheef jiraata dha.
Warri yeroo san carrooman, gaanfuma Afrikaa keessayyuu kan injifannoo Ameerikaa jala luucca’anii darban warra akka EPLF fi TPLF faan mirga argatanii yommuu injifatan, Jaarmiyaan keenya ABO’n sababoota hedduu dhaaf gufateera. sababoota turan yeroo adda addaatti yaada wal falmisiisaa haa kaasaniyyuu malee hooggantoonni barasii ibsaa waan turaniif amma ibsuu hin feesisu.
ABO’n aangoo biyyoleessummaa Oromiyaa fi impaayera sanaa dhuunfachuu irraa gufatee tapha siyaasa yeroo sanaa keessaa moggeeffamu illee dhaabni keenya ABO’n haamileen kufee, abdii kutee mammaratee diina jala galee hin ciifne. Qabsoo irraayis duubatti hin deebine. Jaallan qaqqaalii itti wareegee dhaloota qaruufii oomishuutti seene, diina kokkee walqabaatii hanga yoonaa itti jira.WBO, beelaafi dheebuu damdamatae kaayyoo kaleessa hangafoonni keenya irratti kufan sanaaf hardhas qeerroon faajjii kaasee utuu deemaa jiruu xawalwaallonni danta dhuunfaf bololan laamshessuuf yaaluun isaanumaaf qaanii mataasaanii yoo tahe malee; ABO injifannoo sichi gonfaatuufi gonfachaa jirurraa taakkuu tokkollee duubatti hin deebisu.
Addi Bilisummaa Oromoo, utuu gantuun nu keessaa halkanii guyyaa burqaalee xixiqqoo waqxii gannaa burqanuu, gantoonni diinaf irbuu seenan dhaaba kana dhabsmsiisuuf akka rifeensa mataa namaa baayyatan bibbiqilanuu, utuu dhaaba kana dantaa addaatiin bitamanii keessaa caccabaafi diiggaaf irratti bobba’anuu, utuu hooggantoonni duraanii abdiin meeqa irrra utuu jiruu diinan bitamanii ykn abdii muratanii, diinatti galanii harka kennatanuu, utuu gantoonni hedduun maallaqa miliyoonota itti nyaatanii irratti hojjatanuu, utuu maqaa adda addaatiin keessaa yaa’anuu, ABO’n hardhas eyyeen jabaadha. Haala siyaasa ganafa Arfrikaa yommuu addunyaan ija ishee guutuu shorokoeessummaafi finxaalessumama irratti duuluuf wayyaanee faana hiriiranuu, utuu murni wayyaanee maallaqa biliyoonan ramaddee dhaaba kana xureessufi yakkuuf halkanii guyyaa irratti bobbaatee jirtuu, ABO’n hardhas jabaa dha. Eyyeen ayyaana isaatuu dhaloota damboobsee,injifannoon gaha. Warri garuu gogaa hoolaa uffatanii, sabboontotaafi qabsaahota Oromoo fakkaatanii dhaaba keenya xiqqeessuuf deeman yoomillee hin milkaa’an!
Dhugaa jiru galtoonnifi fakkaattoonni akkasumas af-faajjeesitoonni dhaaba kana dhabamsiisuufi xiqqeessuf sududaafi lafa jalaan irratti hojjatan illee ”ABO’n abdii keenya! Abbaan biyyaa ABO dha. fi k.k.f” jechuun sabni Oromoo alaafi keessatti damboobsaa jira; sichis daran damboobuuf jira.
Dhaaba keenya isheen kaleessa hudduu diinaa jala gugguufaa turteefi diinaf hojjachaa turte hardhallee itti jirtuu fi warri xiqqeessu yoomillee diina innikaa, kanneen sammuyyaan isaanii sirna habashootaa sammuu keessaa of baasuu hin dandeenye dha.
Kanneen biroo immoo gantoota saba keessaa baatee garaaf bultuudha. Kana malees warreen farra qabsoo Bilisummaa Oromoo ta’an akka waan ABO’n tasuma hin jirree fi du’ee keessa deebii akka hin qabnetti dhabameera jettee xeebaa baatee, xoophiyummaa jarri habashootaa,”moderate oromo” jettuunin sammuyyaan ishee guutame sana tiksuuf waardiyaa dhaabbattee afaan Oromoo sabboonummaa kijibaan saba burjaajessitus, ABO’n yoomiyyuu hin dhabamu.
ABO’n dhaaba keenya, abdii keenya; ABO’n manii bilisummaafi walabummaa lafa kaayatee qabsoo jalqabe sana gahuun waan ooluu miti.”Barri ni darba, taajjabni hin darbu.” ABO’n akka diinonni keenya kan keessafi alaa ololaafi shiraan dhabamsuuf duulan utuu hin taane dhugaa jaallan kaleessa qabsoo tana tinnisuuf dhiigan sararaniitu eega; isatu nu tiksas, nus waardiyaa dhaabbannee eegganna.
Kanneen saba burjaajeesuuf, uummataan waan biraa jechaanii dhaaba keenya ABO tti duulan yeroo gabaaba keessatti yommuu WBO’n diinaaarraa aanee bilisummaa fidu qaaniin waaroo salphinaa uffachuun ishii hin oolu. Xoophiyaan isaan lafa jalaan dahata dhaabbilee adda addaa godhatanii suphuufi tursiisuf deemanis daaraa taatii; Oromoon ni dambooba, oromiyaanis ni bilisoomti. Kanammoo addi keenyaa ABO’n maniin ni gaha!
Alas teenyaa pilaaneetii addaarraa, kaayyoo hangafoonni keenya kaleessaa lafa kaa’an fuunee maniin gahuun irbuu dhalootati. bakkayyuuttuu dirqama nurraa eegamu bahuuf qophii dha!
Ajjeessuuf Moo Fayyisuuf?|Simarsan — August 9, 2017
Ajjeessuuf Moo Fayyisuuf?|Simarsan
Qabsoo saba Oromoo yeroo gara yerootti gara boqonnaa ol aanaa fi haarawaatti ce’aa jira. Mootummaan biyya sanan bulcha jedhus qabsoo uummata kanaa ukkaamsuuf ganamaa fi galgala waan qabu hunda bifa adda addaan gargaaramuun ukkaamsuuf yaalaa jira.
Torbanoota lamaan darban keessatti Magaalaa Amboo giddu gala Warraaqsa Oromoo ta’uu baroota dheeraaf tajaajilte keessatti Konkolaatota gargaarsaan argamanitti fayyadamuun maxxansa maqaa Ministeera Fayyaa osoo ofirraa qabuu loltuu agaazii guuruun uummata irratti duulchisaa akka turanii fi konkolaata tokko irratti ejjennoon Qeerroo Bilisummaatiin fudhatamuusaa karaa marsaa hawaasalee gara garaa ibsamaa ture.
Ta’us namoonni tokko tokko ejjennoon konkolaataa akkasii irratti maaliif fudhatame jedhan quuqama qabeenyaaf qaban haa ta’u loogii mootummaa nama ajjeessuuf qaban ibsuuf ta’u waan beekame jiraatu baatus mormaa turaniiru.
Namoonni manneen hidhaa wayyaanee keessatti dararsa baroota dheeraa fudhachaa turnii fi mala mootummichi itti fayyadamu hundeerraa beekan tokko tokkos fuula Facebook isaanii irratti akka kanaa gadi suura citaa kanarra jiruun ibsuuf yaalanii turan.
Guyyaa har’aattis jechuun Hagayyaa 9,2017 irra deebi’uun mootummaan wayyaanee konkolaataa wal fakkaataadhaan agaazii fe’uun Magaalaa Amboo keessatti duula yeroo gaggeessaa jiran harkaa fi harkatti qabamee jira.
Ragaalee suuraan arganne kaneen armaan gadii kana daawwadhaa…
Konkolaatonni kun argaman gargaarsaan yeroo ta’u mootummaan yeroo dhiyootti gargaarsa fayyaafan oolcha jechuun Doolaara Ameerikaa miiliyoona 1.782 fudhatee jira. Qarshiin kun qoqqooddaan yommuu kaa’amu:
Ittisa HIV/AIDS- USD 1,079, 000,000
Ittisa Busaaf – USD 535,000,000 and
Ittisa dhukkuba Sonbaaf -USD 167000 00
Qarshii haala kanaan fudhate ittiin uummata kana fayyisuu caalaa ajjeessuuf akka fayyadamaa jiru gochaa kana caalaa kan ibsu hin jiru.
Kan ilkaaniin firaa garaan diinaa! — January 14, 2016
Kan ilkaaniin firaa garaan diinaa!
JANUARY 14, 2016 /7 COMMENTS
Haalli amma keessa jirru kun haala baay’ee wal dhahaa fi eenyummaa namaa adda baasnee beekuu dadhabuurra geenyee jirra.
Namni Birraa Gammadii jedhamu bara 2013 Yuunivrsiitii Jimmaa irraa barnoota Saayikooloojii ykn Xiin sammuun eebbifamee miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Facebook fi Youtube dhuunfachuun olola fakkeessoo addaa gaggeessaa turuun isaa ni beekama.
Akkuma amala isaa ji’oota lamaan sadan kana keessa haala qabatamaa Oromiyaan wal qabsiisuun miidiyaa dhuunfatee erga waan hedduu dubbataa tureen booda yeroo adda addaatti namoota isatti siqan sobaan guutaa tureera.Kanaafuu,namoonni isatti amanan hedduunis kiyyoo inni qopheesseen irbaata bineensaas ta’aniiru.
Impaayera Itiyoophiyaa keessatti bilisaan miidiyaarra sa’a 24 taa’anii waan garaa ofii haasawuu mitiitii asaasuunillee biyya hin danda’amne keessatti waggaa hamma kana otoo hin gaafatamiin dubbachaa turuun isaallee dhala Oromoo irra caalaa keessatti shakkii otoo hin uumiin hordoftoota hedduu horachuun qabsoo Uummata Oromoof nama gufuu guddaa ta’aa ture dha.
Fakkeenyaaf gara duuba seenaa nama kanaa yoo hordofne yommuu barataa Yuunivarsiitii turetti Kilabii GDSAO(Gumii dagaagina Aadaa fi Seenaa Oromoo) jedhamu keessatti akka barataa tokkootti hirmaachuurra darbee kilabii sana adda durummaan nama basaasuun shoora olaanaa tapataa ture dha.Itti aansuun barattoota daree isaa 21 ol akkasumas barattoota Oromoo Yuunivarsiitii sana keessatti ciccimoo fi qabsoo Oromoo irratti dhoksaan wal gurmeessuun socho’aa turan hedduun akka mooraa sana keessaa bifa addaa addaan sababni itti uumamuun haqaman,ukkaamfaman,akkasumas ijoolleen achi buuteen isaanii dhabamanii hamma yoonaa haatii abbaan isaanii imimmaan Waaqatti facaafataa jiran hedduutu jira.
Waan hunda caalaas Mootummaan Wayyaanee namoota bebbeekamoo dhalootaan Oromoo biyya alaa jiraatan keessummaa aartistoota fi atileetota biyyatti waamsisan akka basaasuufille hojjechiisaa turan.
Namni kun baay’ee kan nama dhibu keessaa kana dura nama maqaan isaa Mahaammad Tufaa Barisoo jedhamu yeroo ammaa biyya Sudaan jiraatu waliin ta’uun yommuu Kadir Martuu biyya Sudaan deemee turetti odeeffaannoo guutuu waa’ee Artistii kanaa itti siqiinsaan sirriitti waan beekuuf waan tokkollee otoo hin hambifatiin dabarsee kennuudhaan mana hidhaa keessatti gidirsiisaa tureera.Inni kunis isa hanqannaan yeroo inni mana hidhaatii gadi dhiifamee gara biyyaatti deebi’u immoo toora miidiyaa fi garee adda addaa irratti al takkaa Kadir Martuu habashaa ykn Amaara jechuun yeroo biroo immoo rakkateera qarshii gargaaraa jechuun lammiiwwan Oromoo biyya alaa jiraatan waliin dhahaa fi wal loolchiisaa tureera.
Yommuu gola Oromiyaa adda addaa keessatti dhimma maaster pilaanii Finfinneen wal qabatee diddaan jalqabamuttis haala qilleensichaa waliin dafee of unachiisuun olola dhugaa fakkaatu kan keessi isaa summiin wal make bifa viidiyoodhaan facaasaa namoota sabboontota ta’an biyya keessaa fi biyya alaa jiran sobuun gargaarsa qarshiillee fudhachaa tureera.
Kanumaan wal qabatee namoota isaa waliin karaa keessaa haasawan mara waa’ee ykn eenyummaa isaanii fi teessoo jireenya isaanii fudhachuun balaa hedduuf saaxileera.Yeroo adda addaattis namoota kanaan gidduu kana hidhamuufan jedha,mootummaan halkaniif guyyaa na barbaadaa fi wantoota biroo jechuun nama mootummaan baay’ee barbaadamu of godhee itti odeessaas tureera.Erga yoomiitii kan Mootummaan wayyaanee namatti dhaammatee gidduu kana dhufeen si qaba manatti na eegi jedhee beekaa? Namni waan namni dubbatuun sammuun isaa wal dhahamee duukaa yaa’aa tures kunoo hidhaa sobaa ofiif qopheessee warra dhugaaf falmaa turan dhibbaan lakkaa’aman fudhatee gara mana hidhaa erga seeneen booda ofiisaa balaan qaamaa tokkollee otoo isa irra hin gahiin mootummaan biyya bulchaa jiru bilisaan gadi isa dhiiseera.
Kun nama kamuu keessatti shakkii uumuu qaba.Hamma kana viidiyoo ragaadhaaf itti dhiyaatee hidhaa umurii guutuullee akka seera biyya sanaatti itti murteessisu otoo qabuu akkamiin gadi lakkifamuu danda’aee? Inni dhala Wayyaanee ta’eetu warri waa tokko hin godhiin hiriira nagaa bahanii kan gaaf tokko Facebook fi miidiyaan namni irraa wal nyaatu kun maal akka ta’e hin beekne Jaarsolii,Jaartolii fi daa’imman ajjeefamaa jiranitti kaanimmoo lafa buuteen isaanii dhabametti dargaggeessi akkanaa kun gadi dhiifamuunsaa baay’ee nama ajaa’iba.
Kaanillee kaanii, ijoollonni hammasaa kana dubbatanii miti; safara keessatti lafa kophee qulqulleeffatanitti walitti qabamtan jedhamuudhaan ukkaamfanii achi buuteensaanii dhabaman hedduutu jira.Kanaafuu Birraan Gammadii basaastuu cimaa wayyaaneen miidiyaa irra kaa’uun tapha xiinsammuu akka nutti taphachaa turan ifa nuuf taasiseera.
Torban tokko duras mana hidhaa hidhame jedhame keessaa gadi lakkifamuunsaas karaa namoota adda addaa itti siqaniin bahee jira.Yeroo ammaa kanattimmoo Mootummaan Wayyaanee nama kana gara biyyoota ollaatti erguun akka inni basaasuuf qophii fixanii jiru.Kanumaan wal qabatee ergamasaa kan jalqabaa Mahaammad Tufaa Barisoo waliin ta’uun biyya sudaan keessatti raawwachuuf kan ergame waan ta’eef qeerroon achi jiraattan of eeggannoo cimaa gochuun isinirra jira.
Adeemsi isaanii inni itti aanu gara biyya Misiraa magaalaa Kaayiroo yommuu ta’u achittis bifa baqataan dhaqee sochii dhalattoonni Oromoo biyya sana jiran Mootummaa biyya Misiraa waliin ta’uun gochaa jiran Mootummaa Wayyaanee waan sodaachiseef akka dhaqee dadhabsiisuuf adda durummaan nama ergame dha.
Kanaafuu,dhalattoonni Oromoo ala jiraattan marti nama kanarraa akka of eeggattan akkasumas bakka argame maratti ija itti dhiyoon hordofamuu fi ejjeennoon sirreessuu irratti fudhatamuu qaba.